Home FARSAMADA FOOTBALL Michel Platini Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
LB waxay soo bandhigeysaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta Elite oo si fiican loo yaqaan 'nickname'Boqorka". Mawduuca Michel Platini Childhoodhood iyo Xogta Aan Bixin Karin ayaa kuu keena xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, asalka qoyska, nolosha xiriirka, iyo xaqiiqooyin kale oo caddayn ah oo caddaynaya (wax yar).
Sheekada Micheal Platini waa sheeko kale oo xiiso leh oo kaa qaadaya safar uu ku soo kordhaayo madow si uu u caan baxo iyo sidoo kale dhammaadka murugada ee uu horey u soo qabtay. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Michel Platini Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta looyaqaano -Nolosha Hore
Michel François Platini wuxuu ku dhashay maalinta 21st ee June 1955 ee Joeuf, France. Waxa uu ku dhashay aabihiis, Aldo Platini oo xilligiisii ​​dhalashadiisa ahaa macalinka iyo macalinka kubadda cagta. Dhinaca kale, Michel hooyadii, Anna Platini waxay ahayd bartilmaameedkii Bar Des Sportifs, taas oo tarjumaysa ciyaaraha isboortiga. Qoyska heerka dhexe ee asalka ah ee uu waalidku soo jeediyo in uu bilaabo inuu si madax bannaan u noqdo Michel.
Isagoo kordhaaya qoyska dhexe ee Michel - sida caruurta intiisa badan waqtigiisii ​​- waxay qaadatay ka dib markii uu aabaheed ciyaaraha isboortiga ugu jecelay, kubada cagta oo loo ogolaaday inuu kubada cagta u ciyaaro si heer sare ah.
Muddo dheer ma aysan dhicin ka hor inta uusan kufarin ciyaartoydiisa oo ay ku soo qaadatay naaneyska ugu horeeya ee naanaysta "Peleatini"Isagoo aqoonsanaya amaan daro isaga ku jira isaga oo ah kubadiisii ​​hore ee kubada cagta.
La yaabka ka mid ah xirfadaha caruurnimada ee uu leeyahay waxa uu ahaa awooda uu ku qaadan karo darbiyada kubadda cagta ee burcadbadeedda ee deriska ah ee ku nool tuuladiisa oo loo tixgeliyey in ay halis ku yihiin nolosha iyo hantida.
Michel Platini Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta looyaqaano -Shakiga Wadnaha Wadnaha ah
Si kastaba ha ahaatee, Michel ayaa ku fiicneyd waxa uu kubada cagta u heysto isaga oo si fiican u ciyaaray kubada cagta. Ka dib markii uu helay khibrad badan oo ku saabsan kubada cagta, Michel ayaa ka fariistay kubada cagta ee FC Metz, laakiin waxaa diiday kooxdii si khalad ah u tixgelisay inuu kubada cagta ku ciyaaro shaki wadnaha oo daciif ah.
Dhalinyar iyo hiboow, Michel ma ahayn qof u ogolaan lahaa fursad uu ku dhex maro faraha. Waxa uu ka soo horjeestay diidmadiisa kooxda, waxaana la siiyay fursad uu ku cadeeyo boodiisa aan garoonka ku ciyaarin, laakiin isagoo hawada ku duubaya mashiinka uu ka shaqeynayo dhakhtar la taliye ah oo ay bixiso FC Metz.
Inkastoo aysan dooneynin inay fursad siiso, Michel ayaa baaritaan ka badan intii ugu fiicneyd oo uu soo booday daqiiqado ka dib, horumarinta dhakhtarku wuxuu u qaatay inuu ku kalsoon yahay in uu ku kalsoon yahay iyo sabab diidmo ah.
Michel Platini Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta looyaqaano -Dhismaha Xirfadaha
Downtrodden, oo la riday, laakiin aan la oggolayn, Michel ayaa geeriyooday qeybihii noloshiisa oo uu siiyey kubad xirfadeed kubad kale oo uu ka helay koox uu ku kalsoon yahay in la aqbalo iyadoo wadnahiisu aysan diidi karin diidmo kale.
Naadiyada kale ayaa noqon kara kalsooni badan AS Nancy halkaasoo aabihiis uu u shaqeeyay sida xubin ka mid ah maamulka kubada cagta ee kooxda?.
Dhaqtarka kooxda Metz ayaa ka mid noqday ciyaartoyda ugu fiican ee kooxda deriska ah ee AS Nancy Lorraine, halkaasi oo Michel uu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah taasoo keentay in uu noqdo ciyaaryahan caan ah ama gooldhaliyaha kooxda.
Michel Platini Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta looyaqaano -Kacsanow inaad ku guulaysato
Waxa ay aheyd AS Nancy in Michel uu soo bandhigay xirfad cajiib ah oo laad xor ah, iyo sidoo kale awood dhameystiran oo kubada cagta ah, isagoo dhaliyey goolal 98 ciyaaraha 181. Mitchel oo ah da'yarta 21, ayaa Mitchel u saftay xulkiisa France tan iyo markii xulalka kale ee qaramda gaar ahaan Czech ay si gaar ah u dhibtoodeen laad xor ah.
Mowjadaha Fame ayaa soo martay markii Michel uu ahaa ciyaaryahan Juventus ah ka dib markii uu ku guuleystay goolkii guusha ee Saint Etienne uu dhaliyay gool rigoore ah islamarkaana uu goolka guusha ka dhaliyay Liverpool taasoo ka dhigtay in kooxdiisa ay qaado koobkii European Cup. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Michel Platini Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta looyaqaano -Nolosha xiriirka
Waxaa jirtay haweeney kaliya oo sheeko jilicsan ku leh Michel Platini, waxayna ku dhacdaa xaaskiisa Christelle Bigoni.
Michel ayaa wali u ciyaaraya AS Nancy markii uu la kulmay xaaskiisa Christelle, oo markaas ardayga sayniska dabiiciga ah. Waxay sidoo kale ahayd jacayl isboorti oo marnaba ha iska xishoonin in la aqoonsado ninkeeda oo ku jira raadsashadiisa kala duwan.
Lammaanuhu waxay guursadeen 1977 waxayna is guursadeen tan iyo wixii ka dambeeyay.
Ururka shaqaaluhu wuxuu ku baraarugsan yahay laba carruur ah, Laurent Platini iyo Marin Platini.
Michel Platini Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta looyaqaano -Dhibaatada Heysel Stadium
Dhibaatada garoonka hey'adda Heysel ayaa ahayd isku dhac dhexmaray taageerayaasha Liverpool iyo Juventus, taas oo markii dambe aragtay in derbi lagu riixay derbi taasoo markii dambe burburay. Dhacdadan naxdinta leh waxay ka dhacday 29th May May 1985, taasoo keentay dhimashada dadka 39-badanaa Talyaaniga iyo taageerayaasha Juventus - halka ugu yaraan 600 kale ay ku dhaawacmeen.
Kulankii ugu dambeeyay ee dhacay isla maalintaas iyo goobta uu Michel Platini ka dhaliyay gool rigoore ah islamarkaana uu goolka guusha ka dhaliyay Liverpool si uu ugu tartamo koobkii koobabka Yurub wuxuu sameeyay Michel Platini oo u muuqda mid aan caqli gal aheyn inuu u dabaaldego goolkiisii ​​uu ku guuleystay inkastoo lumiyay noloshii la duubay maalin aan macquul aheyn.
Michel Platini Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta looyaqaano -Xirfadaha Kubadda Cagta ee Kubada Cagta
Michel Platini wuxuu ka fariistay ciyaaraha kubada cagta markii uu da'diisu ahayd 32 bishii June 1987. Bishii ka dib markii uu ciyaaraha ka fariistay, waxa uu tababare u soo noqday tababaraha xulka qaranka Faransiiska ee 1988, waxaana uu arkay kooxdiisa u qalma 1992 European Championship iyo sidoo kale rikoorka cajiibka ah ee ku guuleystay sideedii kulan ee group-ka.
Inta u dhaxeysa 1988 ilaa 2006 Michel ayaa ku biiray UEFA iyo qalabka FIFA, isaga oo adeegsanaya guddiyo kala duwan ilaa iyo inta uu ku sugan yahay 2006, lana tartamayay Lennart Johansson oo loo doortay madaxweynaha UEFA.
Xilka madaxtinimo ee Platini wuxuu socday muddo sanado ah 8, 255, muddadaas oo ahayd mid si cad uga soo horjeeda mudada sanadka 16 ee uu horey u ahaa, Lennart Johansson. Maxay ka dhigi laheyd fekerka Faransiiska ee gaabnaa waqtigiisii ​​uu ahaa madaxweynaha UEFA; hindise ama khasab?
Michel Platini Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta looyaqaano -Ka Qayb-Qaadashada Musuq-maasuqa
Si kastaba ha ahaatee, Platini iyo Blatter ayaa lagu helay dambi ah musuqmaasuq, farsamo xumo, khilaafka xiisaha, xisaabinta been abuurka ah iyo wada-xaajoodka guddiga anshaxa FIFA.
Horumarinta ayaa dhameystirtay rabitaanka madaxweynaha ee Platini (sida lagu mamnuucay mamnuucidda 8 sanadka kaas oo markii dambe loo yareeyey sanadihii 6), isaga oo siiyay Gianni Infantino oo ku tartamayay kuna guuleystay booska. Waxa kale oo uu u horseeday inuu is casilo madaxweynaha UEFA ka dib markii uu ku guuldareystay inuu lix sano oo ganaax ah uu ka soo laabto kubada cagta.
Michel Platini Sheeko dhalinyaro sheeko dheereeya Xogta looyaqaano -Xaqiiqooyin Kale
Heshiiska Platini ee Juventus xagaaga ee 1976 ma uusan ku xirneyn qandaraas, laakiin waa lacag qiimo leh sida xeerka Faransiiska waqtigaas.
Waxa uu ku guuleystay inuu ka soo muuqdo labo dal oo caalami ah. (Faransiiska iyo Kuwait)
Waa seddex jeer ku guuleystay Ballon d'Or. Tani waxay dhacday sanadihii; 1983, 1984 iyo 1985.
Wuxuu ahaa Zinedine Zidane idol carruureed.
Intii lagu jiray waqtigiisii ​​maamulaha kubada cagta, wuxuu si xoogan uga soo horjeeda ciyaartoyda hoos-u-dhigta 18, oo uu u arko inuu yahay sharci darro ka ganacsiga caruurta.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Michel Platini Childhood Story iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo caddaalad. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Gianni Infantino Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha aan la Ogeyn
Taariikhda wax laga beddelay: 9-ka Meey, 2020
Taariikhda wax laga badalay: July 15, 2018
Taariikhda la beddelay: Abriil 21, 2020
Taariikhda wax laga beddelay: Diseembar 1, 2019